I-Master Bedroom kuCanal of Amsterdam City Center - I-Airbnb
I-Master Bedroom kuCanal of Amsterdam City Center
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Patrick & Guus
Ngo-110 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Patrick & Guus Ungumbungazi ovelele
Emseleni omkhulu omaphakathi ne-Amsterdam, i-Amstel, IGUMBI ELIYIMVA kuleli fulethi elihle elinakho konke okudingayo likulindile! Futhi ngokuyimfihlo ngisho ngasese, ithuba elincane lokubona noma ubani ngesikhathi sokuhlala kwakho, ngakho-ke kuzwakala sengathi unendawo yonke kuwe!
Hamba ngaphandle ukuze ukhethe kuzo zonke izindawo zokudlela ezithokomele ezihamba ibanga elide, kanye nemisele edumile esebangeni lokuhamba ukusuka endlini!
Ifulethi lingakwesokudla emngceleni we-Amsterdam's 'Cartier Latin' (De Pijp), enye yezindawo eziyintandokazi yabantu abahlala e-Amsterdam. Konke ofuna ukukwenza ukuze ulungiselele ukuhlala kwakho e-Amsterdam (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Heineken Brewery, Stedelijk Museum, Leidseplein, Dam Square) kungaphakathi kwebanga eliyimizuzu eyi-10 ukusuka efulethini.
Uma ufuna inhlanganisela ephelele yokubuka izivakashi kanye namabha nezindawo zokudlela ezinhle kakhulu zedolobha, uthole indawo ekahle yokuhlala endaweni ekahle!
Uzohlanganyela ifulethi nomnikazi, kodwa akukho ukukhathazeka, efulethini yakhelwe ngendlela yokwenza uzizwe unendawo yokuhlala ngokwakho. Ithuba elincane uzobona noma uzwe umnikazi! Uzoba nekamelo langasese elinakho konke okudingayo. Isiqandisi sakho, i-tv yakho ye-flatscreen ene-Chromecast yazo zonke izidingo zakho ze-netflix, ikona lakho lokudlela, nokusebenzisa KWAMAHHALA kwe-WIFI esheshayo. Awudingi nokuphuma ekamelweni lakho uma ungafuni, ngoba unakho konke okudingayo!
Ifakwe yonke into oyidingayo ukuze uhlale, kuhlanganise neshawa!
Kufakwe nencwadi yomhlahlandlela ephelele eya e-Amsterdam, okungeyakho ongayisebenzisa ngesikhathi uhlala! Futhi uma kungenjalo, ngibuze, insizwa yendawo ekhululekile ekhulele lapha, izindawo ezinhle ongaya kuzo.
Imakethe edumile yase-Albert Cuyp yayo yonke imikhiqizo yakho emisha iseduze kakhulu, kanye nemakethe enkulu, eseduze nje.
Amashidi ahlanzekile namathawula konke kufakiwe. Ikhofi (Nespresso) kanye netiye kufakiwe (unazo zonke lezi zinto ekamelweni lakho).
Ngokuvumelana nezimo ngokuphelele izikhathi zokungena nezokuphuma, ungaqiniseka ukuthi uzoyijabulela i-Amsterdam ngokugcwele, hhayi nje njengesivakashi kodwa futhi njengomuntu owazi kahle ukuthi kufanele aye kuphi (ngizoqinisekisa ngokwami ukuthi lokho kuyenzeka). Ngiyazi idolobha kusukela ngaphakathi nangaphandle, ngakho-ke ngiyakwazi ukuhlela kahle yonke into (Ngiyazazi izindawo zokudlela ezihamba phambili, namabha namakilabhu aphambili edolobheni).
Ngiyohlale ngikwamukela wena mathupha, ngikuchazele ukuthi izinto zikagesi zisebenza kanjani futhi ngikubonise kahle lapho okumele uye khona. Uma unemibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho, mayelana nendlu noma lapho ungaya khona edolobheni, ungathumela imiyalezo noma ungishayele ucingo futhi ngizokusiza!
Uma ufuna ikamelo lakho langasese likanokusho efulethini elinombono wekhadi leposi lase-Amsterdam, zonke izinsiza ozidingayo nokunye, okutholakala kahle ukuze ubonwe indawo kanye nezindawo zokudlela eziningi namabha ongakwazi ukukuphatha, umsingathi owazi konke. mayelana nedolobha ngalokho okufanele ukwenze nokuthi ungaya kuphi, lena yindawo yakho!
I-wifi esheshayo – 110 Mbps
Isiqandisi esiyi-Electro Line
4.56 out of 5 stars from 337 reviews
4.56 · 337 okushiwo abanye
Ifulethi lingakwesokudla emngceleni we-Amsterdam's 'Cartier Latin' (De Pijp), enye yezindawo eziyintandokazi yabantu abahlala e-Amsterdam. Konke ofuna ukukwenza ukuthuthukisa ukuhlala kwakho e-Amsterdam (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Heineken Brewery, Stedelijk Museum, Leidseplein, Dam Square) kungaphakathi kwebanga lemizuzu eyi-10 ukusuka efulethini.
Ibungazwe ngu-Patrick & Guus
nganoma imiphi imibuzo ungangabazi ukuyibuza!
SICELA UQAPHELE, kunenkokhelo yokungena sekwephuzile ngemva kuka-19:00 ka-€10.-
UPatrick & Guus Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 0363 98F3 BCE7 CC51 4772